Manchester United oo barbaro la dhaafi weysay kooxda Wolverhampton… _ SAWIRRO – Gool FM
Manchester United oo barbaro la dhaafi weysay kooxda Wolverhampton… _ SAWIRRO
(England) 19 Agoosto 2019. Kooxaha Wolverhampton iyo Man United ayaa ku kala baxay barbaro 1-1 ah kulankooda labaad ay ku wada ciyareen horyaalka Premier League xili ciyaareedkan cusub ee 2019/2020.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaamineysay kooxda Manchester United.
Daqiiqadii 27-aad Anthony Martial ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Manchester United, wuxuuna dheesha ka dhigay 1-0, kaddib caawin uu ka helay saxiixbkiis Marcus Rashford.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay kooxda Manchester United ayaa ciyaarta ku soo gashay dardar xoogan waxayna abuureen fursado badan si u dhaliyaan goolka labaad ee dheesha, dhankeeda Wolverhampton ayaa raacdo u gashay sida ay ku heli lahaayeen goolka barbaraha.
Laakiin daqiiqadii 55-aad xiddiga Wolverhampton ee Ruben Neves ayaa gool aan inaba caadi aheyn ee qurux badan wuxuu ka dhaliyay kooxda Manchester United, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah, Joao Moutinho ayaana goolkan caawiyay.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay barbaro 1-1, ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Wolverhampton iyo Man United, kulankoodii labaad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan.
Barcelona oo soo saartay war rasmi ah ee ku saabsan Ousmane Dembélé, kaddib dhaawac soo gaaray